သင့်ကလေးဗိုက်နာခြင်းကို အဖြေရှာကြမယ် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
>> ကလေးများ ဗိုက်နာချိန်တွင် တွဲ၍ဖြစ်ပွားတတ်သော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ -
1. ကလေးအီခြင်း၊ ဂျီကျလာခြင်း
3. အစာကောင်းစွာမစားခြင်း၊ မအိပ်ခြင်း
6. အငြိမ်မနေနိုင်ဘဲ ကြွက်သားများတောင့်တင်း၊ တွန့်လိမ်နေခြင်း
7. နာလွန်း၍ မျက်နှာရှုံ့မဲ့နေခြင်း
ကလေးများ ဗိုက်နာခြင်းမှာ အဖြစ်များသော်လည်း အများအားဖြင့် ပြင်းထန်သောရောဂါများကြောင့် မဟုတ်တတ်ပေ။
>> ကလေးများ ဗိုက်နာခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်သော အဖြစ်များသည့်အကြောင်းရင်းများမှာ -
(1) ဝမ်းဗိုက်ရစ်နာခြင်း၊ သူငယ်နာထခြင်း (colic)
သုံးလအောက်ကလေးငယ်များတွင် အဖြစ်များပြီး နေ့လယ်ခင်းပိုင်းနှင့် ညနေစောင်းများတွင် အငိုသန်လာခြင်း၊ ကလေးငိုခြင်းမှာ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး3နာရီခန့်ကြာမြင့်ပြီး ဖြစ်ပွားနှုန်းမှာလည်း တစ်ပတ်လျှင်3ရက်အထက်နှင့် အနည်းဆုံး3ပတ်ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ခြေထောက်ကို ရင်ဘတ်နှင့် ထိသည်အထိကွေးထား၍ ငိုခြင်း၊ မကြာခဏ လေလည်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်လျှင် ကလေးသူငယ်နာထသည်ဟု အကြမ်းဖျင်း ယူဆနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ကလေးငယ်အား စောင်ဖြင့်ထွေးပွေ့ထားခြင်း၊ ကလေးကို ချီပိုးလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ လှုပ်ခတ်ချော့မြူပေးခြင်း၊ ကလေးကို ရာဘာနို့သီးခေါင်းပေးစို့ခြင်း၊ အာရုံလွှဲပြောင်းစေနိုင်သောအသံများ ပြုခြင်းဖြင့် ကလေး သက်သာငြိမ်သက်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကလေးငယ်များတွင် ဝမ်းဗိုက်ရစ်နာခြင်း၊ သူငယ်နာထခြင်းနှင့် လေနာထခြင်းမှာ ယှဉ်တွဲဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော ပြဿနာများဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်၏ အူလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကလေးငယ် မျိုချသည့်လေများကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အချို့အစာများကို မချေဖျက်နိုင်သေး၍သော်လည်းကောင်း၊ နို့တိုက်မိခင်စားသုံးသော အချို့အစာများကြောင့်သော်လည်းကောင်း လေနာထလေ့ရှိသည်။ ကလေးလေနာထခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းရန်အတွက် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသော ကလေးဖြစ်ပါက မိခင်၏အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်ပြီး နို့ဗူးတိုက်ကျွေးသော ကလေးဖြစ်ပါက နို့မှုန့်အမျိုးအစား ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် ဆရာဝန်ထံ အကြံဉာဏ်တောင်းခံသင့်ပါသည်။ Simethicone ပါဝင်သော လေဆေးများကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသင့်အတိုင်း တိုက်ကျွေးနိုင်သည်။
အမျှင်ဓာတ်ပါသော အစားအစာများဖြစ်သည့် အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ လုံလောက်စွာ မစားသောက်ခြင်း၊ ရေသောက်နည်းခြင်း၊ အချို့သောဆေးများ သောက်သုံးနေရခြင်းနှင့် ရံဖန်ရံခါ နွားနို့နှင့်မတည့်ခြင်း အစရှိသည့် အကြောင်းတရားများကြောင့် ကလေးငယ်များတွင် ဝမ်းချုပ်၍ ဗိုက်နာတတ်သည်။ ကလေး ဝမ်းချုပ်လျှင် ဆီးသီးခြောက်ဖျော်ရည် တိုက်ကျွေးခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်တတ်စေသော နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများအား ရှောင်ရှားစေခြင်း၊ ကလေးအား ပုံမှန် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ကစားစေခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။ အထူးသတိပြုရန်မှာ ဝမ်းပျော့ဆေးများကို ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲ မတိုက်ကျွေးသင့်ပါ။
(4) အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်၍ ရင်ညွန့်တွင် ပူအောင့်ခြင်း
အစာချေလမ်းကြောင်း ပြဿနာရှိသည့်ကလေးငယ်များတွင် အစာအိမ်မှအက်ဆစ်ဓာတ်များ အစာရေမျိုပြွန်အတွင်းသို့ ပြန်လည်ဆန်တက်ခြင်းကြောင့် ရင်ပူခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည်။ အဆိုပါရောဂါကို GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) ဟု ခေါ်ပြီး လက္ခဏာများအနေဖြင့် ကလေးငယ်မှ အစာစားရန် ငြင်းဆန်နေခြင်း၊ ကြို့ထိုးခြင်း၊ သီးခြင်း၊ အထူးသဖြင့် ညဘက်တွင် ချောင်းအလွန်ဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူရာတွင် တရွှီရွှီမြည်ခြင်း၊ မကြာခဏ နားပြည်တည်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ ရင်ဘတ်မှအသံမြည်ခြင်း၊ မကြာခဏအန်ခြင်း၊ ကလေး မကြီးထွားလာခြင်းနှင့် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းအတွင်း သွေးယိုစီးသည်အထိ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အဆိုပါရောဂါအခြေအနေများ သက်သာစေရန်အတွက် ကလေးကို အစာကျွေးလျှင် မတ်မတ်ထိုင်စေခြင်းဖြင့် အစာရေမျိုပြွန်တွင်းသို့ အက်ဆစ်ဓာတ်များ ဆန်တက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရောဂါအခြေအနေပြင်းထန်ပါက ဆရာဝန်နှင့်ပြသပြီး သင့်လျော်သောဆေးဝါးများကို တိုက်ကျွေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကလေးအများစုမှာ အသက် (1) နှစ်ကျော်လျှင် ရောဂါလက္ခဏာများမှ သက်သာပျောက်ကင်းလေ့ ရှိပါသည်။
>> ဆရာဝန်နှင့် မည်သည့်အခြေအနေများတွင် ပြသသင့်သနည်း
ကလေးငယ် ဗိုက်နာခြင်းမှာ ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး မသက်သာလျှင် တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့် ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းပြသရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားအန္တရာယ်လက္ခဏာများအနေဖြင့် အန်ခြင်း၊ အဖျားကြီးခြင်း (100.4 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နှင့်အထက်)၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်းနှင့် ရက်အနည်းငယ်ကြာသည်အထိ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်ပါက ဘက်တီးရီးယားပိုးနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့် ကူးစက်ရောဂါများဖြစ်သည့် အူရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း စသည့်ရောဂါများလည်း ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် ဂရုပြုရန်လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အူအတက်ရောင်ခြင်း (အသက်5နှစ်အောက်တွင် အဖြစ်နည်းသည်)၊ အူပိတ်ခြင်းနှင့် ကပ်ပါးပိုးရောဂါများမှာလည်း ကလေးငယ်ဗိုက်နာခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အကြောင်းရင်းများတွင် ပါဝင်သော်လည်း အဖြစ်နည်းလေ့ရှိပါသည်။